मोडेल सडकमा नाँगै हिँडेपछि (भिडियोसहित)
एजेन्सी फ्रान्सकी एक मोडेल सडकमा नाँगै हिड्न थालेपछि अदालतले नाँगै हिँडुनको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । जिन्सको पाइन्ट जस्तो पेन्ट गरेर नाँगै हिड्ने मोडल सुजना नाइसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको यो आदेश...
गर्भवती महिलाका अनौठा र अचम्मलाग्दा शोख (फोटो फिचरसहित)
विश्वमा केही यस्ता गर्भवती महिलाहरु पनि छन् । जो गर्भवती भएको समयमा विभिन्न किसिमका तस्बिरहरु खिच्न रुचाउँछन् । अनौठा र अचम्मलाग्दा गर्भवती महिलाका केही तस्बिरहरु यस्ता छन् : ...
पत्नीका कारण उठीबास
संखुवासभा, मादी मूलखर्कका रत्नमणि अधिकारी पैसा कमाउने सपना बोकेर कतार हानिए। त्यहाँ खटेर कमाएको पैसा घरमा रहेकी श्रीमती निर्मलाका नाममा पठाइदिन्थे। त्यो पैसाले घर फर्किएर सुखका दिन काट्ने सपना थियो उनको। गत वैशाखमा घर...
नेपाल पुरुषप्रधान देश हो। यहाँ पतिहरूका अत्याचारले असंख्य पत्नीहरूको जीवन बर्बाद भएको छ। तर, यसो भन्दैमा पत्नीपीडित पतिहरू हुँदै नभएका भने होइनन्। श्रीमतीका कारण यहाँ धेरै पुरुषको जिन्दगीको जहाज डुबेको छ। विदेशमा पेट मारेर...
सेक्स गर्दागर्दै यसरी गयो ज्यान
३६ वर्षीया लुसी ब्राउनलीमाथि यस्तो विपत्ति आइलाग्यो, जुन धेरै कमले मात्र विश्वास गर्न सक्छन् । हो, उनको जीवनमा साँच्चिकै बिपत्ति आइलागेको छ । त्यो पनि सेक्स गर्दा । सेक्स गर्दागर्दै उनका श्रीमान मार्क जान्स्टनको...
साउदी अरबमा करोडपतिले भीख मागेपछि…
साउदी अरबमा भीख माग्न पाइदैन । तर, भीख मागेको अभियोगमा पक्राउ परेका एक भिखारीको सम्पत्तिको विवरण सुनेर पुलिसहरु आफै दंग परेका छन् । भीख मागिरहेका उक्त व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा पुलिसहरुले उक्त व्यक्तिसँग तीन...
मान्छेका २ सय ३२ दाँत !
झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्ने । एउटा मानिसका कतिवटा दाँत होलान ? हामी सामान्य मानिसको ३२ भन्दा धेरै दाँत हुनसक्ने अनुमानै गर्न सक्दैनौं । तर, भारतमा एक १७ वर्षीयअशिकको मुखबाट चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा २ सय...
समुद्रतटमा सेक्स गरेपछि जेल
मानिसले आफ्नो यौन चाहनामा संयमता अपनाउन नसक्दा कस्तो हर्कत व्यहोर्नु पर्छ भन्ने उदाहरण अमेरिकामा देखिएको छ । घटना अमेरिकाको फ्लोरिडा सहरको हो । यहाँको एउटा समुद्री किनारमा दिनदाहाडै सेक्स गरेका एक जोडी जेल पुगेका...
जापानमा विवाहित जोडीलाई प्वाल परेको कण्डम दिने प्रस्ताव
टोकियो, ३ साउन । जापानका एक प्रान्तीय राजनीतिज्ञले मुलुकको घट्दो जन्मदरको समस्या समाधान गर्न विवाहित जोडीलाई जानाजान प्वाल परेको कन्डम वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन । महानगरपालिका सभासदस्य तोमोनागा ओसादाले यस प्रकारको प्रस्ताव राखेपछि...
अमेरिकन युवतीसँगको मस्तीले जेलको सास्ती
काठमाडौं, ३१ असार । एक अमेरिकन युवतीसँगको रोमान्सपूर्ण सम्बन्धले ठमेलका एक युवक जेल जाकिएका छन् । मदिराले मात्तिएको अवस्थामा एक अमेरिकन युवतीसँग सामूहिक रुपमा यौनसम्पर्क गरेको आरोपमा ठमेलमा स्नुकर सेन्टर चलाउँदै आएको धादिङका गुणराज...
प्रेममा परेका दिदी-भाइले होटलमा गई आत्महत्या गरे
एक-अर्कासंग प्रेममा परेका दिदी-भाइले भारतको इन्डोरस्थित एक होटलमा आत्महत्या गरेका छन् । दुवै जना पछिल्लो १५ दिनदेखि परिवारबाट बेपत्ता बनेका थिए । बेपत्ता भएपछी पुलिसले उनीहरुको खोजि गर्दै थियो । प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा बिहिबार...
तन्नेरीसँग ‘आन्टी’को सेक्स चक्कर, किन ?
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ? देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो त? श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया...